ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကိုရီးယား ချက် ချီချေဝါ ဂါ ဂျာမန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် ဆက်ဆွာနာ ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ တဆောန်ဂါ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် ပါရှန်း ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အာမေးနီးယား (အနောက်) အီတလီ အူရ်ဒူ အော့စက်တီယန် အေးဝေး
ကမ္ဘာဦး ၃:၁၄ ပါစကားများသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင် ဧဝကိုလှည့်ဖြားခဲ့သောမြွေအား ယေဟောဝါ ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်က “သင်သည် ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့် သားယဉ်၊ သားရဲအပေါင်းတို့ထက် ကျိန်ခြင်းကိုခံရ၏။ သင်သည် ဝမ်းဖြင့်သွား၍ မြေမှုန့်ကိုတစ်သက်လုံးစားရမည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ဧဝကိုလှည့်ဖြားခဲ့သောမြွေတွင် ခြေထောက်များရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းတို့ပျောက်ဆုံးသွားသည်ဟု ကျမ်းစာက တိတိကျကျမဖော်ပြပေ။ အချို့က ကမ္ဘာဦး ၃:၁၄ ပါစကားများကြောင့် ထိုသို့ထင်မှတ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်မကျိန်ဆိုမီ မြွေတွင် ခြေထောက်များရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ထင်စရာမလိုပေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
အကြောင်းမှာ ယေဟောဝါသည် ထိုနိမ့်ကျသောတိရစ္ဆာန်ကို တလွဲအသုံးပြုသည့် မျက်မြင်မရဝိညာဉ်သတ္တဝါ စာတန်ကိုသာ အဓိကစီရင်ချက်ချခဲ့သောကြောင့်တည်း။ စာတန်ကို “မုသာ၏အဘ၊” “ရှေးမြွေဟောင်း” ဟုကျမ်းစာတွင်ခေါ်ဆိုထား၏။ ထိုအသုံးအနှုန်းနှစ်ခုစလုံးက ဘုရားသခင်အားမနာခံရန် ဧဝကိုလှည့်ဖြားရာတွင် မျက်မြင်ရ တိရစ္ဆာန်ကို စာတန်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ရည်ညွှန်းသည်။—⁠ယောဟန် ၈:၄၄; ဗျာ. ၂၀:၂။
ဘုရားသခင်သည် မြွေများကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး ဧဝကို စာတန်မလှည့်ဖြားမီကတည်းက သူတို့ကို အာဒံအမည်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမည်။ အသိဉာဏ်မဲ့သောမြွေတွင် အပြစ်မရှိပေ။ မိမိကိုစာတန်အသုံးပြုနေကြောင်း မသိသည့်အပြင် မနာခံသူများအပေါ် ယေဟောဝါ၏စီရင်ချက်ကိုလည်း မသိနိုင်ပေ။
သို့ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်သည် မြွေကို အဘယ်ကြောင့် နိမ့်ကျစေခဲ့သနည်း။ သဘာဝဝန်းကျင်တွင် မြွေတစ်ကောင်၏အပြုအမူဖြစ်သော ဝမ်းဗိုက်ဖြင့်တွားသွားခြင်း၊ မြေမှုန့်ကိုလျက်သည့်အလား လျှာကို ပြူတစ်ပြူတစ်ထုတ်ခြင်းတို့သည် စာတန်၏နိမ့်ကျသောအခြေအနေကို ကောင်းစွာပုံတင်ပြသည်။ စာတန်သည် ဘုရားသခင့်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးအဖြစ် ယခင်က မြင့်မြတ်သောအနေအထားရှိခဲ့သော်လည်း ကျမ်းစာတွင် တာတရပ်စ်ဟုခေါ်ဆိုထားသည့် နိမ့်ကျသောအရပ်၌ ချုပ်နှောင်ခံလိုက်ရသည်။—⁠၂ ပေတရု ၂:၄။
ထို့ပြင် မြွေသည် လူတစ်ဦး၏ဖနောင့်ကို အနာတရဖြစ်စေနိုင်သကဲ့သို့ စာတန်သည် မိမိ၏နိမ့်ကျသောအခြေအနေတွင် ဘုရားသခင့် “အမျိုးအနွယ်” ၏ “ဖနောင့်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်။” (ကမ္ဘာဦး ၃:၁၅) ထိုမျိုးနွယ်တော်၏ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်မှာ ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပြီး စာတန့်လက်ပါးစေများကြောင့် အခိုက်အတန့် ဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသော ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်များသည် အချိန်တန်သည့်အခါ ပုံဆောင်မြွေ၏ဦးခေါင်းကို အပြီးအပိုင်ကြိတ်ပေလိမ့်မည်။ (ရောမ ၁၆:၂၀) ထို့ကြောင့် မျက်မြင်ရမြွေကို ဘုရားသခင်ကျိန်ခြင်းက မျက်မြင်မရ “ရှေးမြွေဟောင်း” ဖြစ်သော စာတန်၏နိမ့်ကျသည့်အခြေအနေနှင့် သူ့အား အစတုံးဖျက်ဆီးခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။
က၀၇ ၆/၁၅ စာ. ၃၁
ရှောလု မိတ်ဆွေဟောင်း၊ ရန်သူဟောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၇
ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၇
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၇